Halkan ka akhrisan kartaa macluumaadka hargabka oo dheeradka ah.
Waa muhiim inaad haddii aad jirran tahay guriga joogto. Dadka badankoodu uma baahna inay tijaabo iska qaadaan. Wax dheeraad ah ka akhriso qoraalka Iska qaadista tijaabo/iska baadhista covid-19.
Iska tallaal covid-19 markaad ka bogsato, haddii aanad hadaba tallaalneyn.
Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxyaalaha halkaad joogto khuseeya.
Waa inaad Isku daydo inaad maalintii dhowr jeer dhaqdhaqaaq samayso.
Lars Ljungström, Dhakhtarka, khabiirka cudurada faafa